UMarlene Dietrich ungumculi owaziwayo emhlabeni kunye nomdlali. Izwe lalo elincinane lihlala kwisithili saseBerlin saseSchöneberg, apho ngoDisemba 27, 1901 wazalelwa kwintsapho kaLouis Erich Otto Dietrich, ipolisa kunye noJohanna Felsing.
EBerlin, uMarlene waya esikolweni sesibini ukuya ku-1918. Ngelo xesha wafunda i-violin kwiprofesa yaseJamani uDessau. Ukususela ngo-1919 ukuya ku-1921 waya kwiiklasi zomculo, wafunda noNjingalwazi uRobert Raitz kwisixeko sase-Weimar. Emva koko wangena esikolweni sabalingisi, ehlelwe nguMax Reinhardt eBerlin. Ukususela ngo-1922, uye wadlala indima emincinci kwiindawo ezininzi zaseBerlin. Ngaloo nyaka kwaphawulwa ngokubonakala kwakhe kwiskrini kwifilimu enesihloko esithi "Umntakwabo omncinci waseNapoleon."
1924 - umtshato kaMarlene Dietrich. Ngomyeni wakhe wokuqala, uRudolph Zieber, wahlala iminyaka emi-5, nangona emtshatweni osemthethweni bahlala kude kube sekufeni kukaRudolph ngo-1976.
NgoDisemba 1924 yaphawulwa ngokuzalwa kwentombi kaMariya.
Ukusebenza kwi-cinema kunye nemidlalo yaseshashalazini uMarlen waphinda waqala ngo-1925, kwaye ngowe-1928 waqala ukurekhoda iingoma kwiplate kunye ne-revue ensemble ebizwa ngokuba "ikhupha emoyeni." Ngomnyaka kamva, uMarlene wabonwa nguJoseph von Sternberg kwi revue "Izibophelelo ezimbini", waza wabizwa ukuba abe nkwenkwezi kwifilimu ethi "Blue Angel" kwendima kaLola Lola. Sekudlulileyo ngo-1930 iDietrich isayine isivumelwano somsebenzi kunye neFirm Paramount kwaye ngomhla we-premiere ye-Blue Angel, ngo-Ephreli 1, 1930, washiya iJamani.
UMarlene Dietrich uzuzile udumo lwehlabathi ngokubonga iifilimu ezintandathu ezikhishwe eHollywood. Kwaye ngo-1939 waba ngummi wase-US.
Kamva kwi-biography yeDietrich, kukho impumelelo kuphela. Wayengumdlali weqonga ophezulu ohlawulwayo ngaloo xesha. Ukuthandwa kwawo akuzange kuphele. Waba neenkwenkwezi kwimifanekiso ethandwayo "Shanghai Express" kunye nefilimu edumile "Venus Blonde", apho enye yeendima edlalwa nguCary Grant. UMarlene Dietrich wadala kwisikrini isithunzi esicacileyo nesicacileyo somfazi ongenayo imigaqo ethile yokuziphatha, kodwa wayehlala ezama ukuzama ezinye iindima.
Ukususela ngo-Matshi 1943, iminyaka engama-3 wanika amakhonsathi kwimikhosi. Kwaye ekupheleni kwemfazwe, umsebenzi wakhe waba nokunyuka kwesibini. UMarlene wadlala kwimveliso emininzi kwimidlalo yecandelo elidumileyo, kuquka i-Broadway.
I-Dietrich ibonakale kwiibhayisikobho 1-2 ngonyaka.
1947 - ukubuyela kweMarlene Dietrich eMelika. Ukuqhafaza kumabhayisikobho kuya kuba ngaphantsi nangaphezulu, udlala kwiindima ze-episodic. Nangona kunjalo, kwakukho ngeli xesha lomsebenzi wakhe wafumanisa italente ephawulekayo. Ngoko ngo-1957 ifilimu "ubungqina bokushushisa" uMarlene waphumelela ngendima yowesifazane owasindisa indoda yakhe entolongweni. Le drama yayisekwimeko yokuba i heroine yayikhohliswa ngumyeni wayo.
Kwesinye ifilimu, i-Nuremberg Trials (1961), wayidlala ngobuchule umhlolokazi othile ongumntu ongenakukwazi ukuzidibanisa no-Reichstag. UDietrich wadlulisela ngokugqithiseleyo intshutshiso yokutshatyalaliswa kweengcamango zamaNazi ngomfanekiso we heroine yakhe. Inxaxheba yakhe yayiyinkimbinkimbi ngumntu ofihlekileyo ofihliweyo kunye nemikhwa ecocekileyo ye heroine.
Kamva, uMarlene Dietrich waba mncinci kumabhayisikobho, kodwa wahlala esiteji. Ngeli thuba, waqala ngokunyanisekileyo ukuqhuba iinkqubo zomsakazo kunye nezihloko kwiimagazini ezimnandi.
Ngowe-1953 - ithathwa njengesiqalo somsebenzi wakhe ophumeleleyo njengomculi kunye nomculi owaqalisa eLas Vegas. Kwizikrini, uMarlene wabonakala engavamile.
Ngo-1960, uDietrich wavakatyelela iJamani ngeentambo. Kwaye ngo-1963 iikhonsathi zakhe zanikwa ngempumelelo eLeningrad naseMoscow.
Ngowe-1979 - ukuguqulwa kukaMarlene, xa umsebenzi wasongelwa ngenxa yengozi. Umdlali we-actress wathola ukuphuka kwe-hip ngexesha lokusebenza kwinqanaba.
Emva koko kwalandelwa iminyaka engama-12 yobomi, ilala. UDietrich akakwazanga ukuhamba, kwaye waqhubeka edibanisa nehlabathi langaphandle kuphela ngoncedo lwefowuni. Yonke le minyaka uMarlene wachitha eParis, endlwini yakhe.
NgoMeyi 6, 1992, uMarlene Dietrich wasweleka kwindlu yakhe eParis. Ingqungquthela esemthethweni yokufa kwakhe kukuphulwa kweentso nentliziyo. Nangona kunjalo, ngokweengcaciso engafanelekanga, iDietrich ithathe umthamo omkhulu wokulala iipilisi ukuze ugweme imiphumo ebuhlungu yomsongo wokukhupha i-cerebral hemorrhage - inguqu eyenzeka ngokuhlwa, ngoMeyi 4.
NgoJulayi 24, 2008, kwisithili saseSchöneberg, kwindlu apho uMarlene Dietrich azalwe khona, i-plaque yesikhumbuzo yafakwa kwindawo yakhe.
UVladislav Galkin nomdlali wakhe
Indlebe esuka kwi pike
Ndingazichaza njani kumfana ukuba ndifuna umntwana?
Isaladi evela kumagqabi ahlaza
Indlela yokusinda kwixesha lokutshintsha
Indlela yokupompa izihlunu zesini?